စစ်မှုထမ်းနေပီဖြစ်သော Exo အဖွဲ့ဝင် သုံးဦး ( ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်တော့ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးလုံး စစ်မှုထမ်းတာ ပီးစီးနိုင်) | News Bar Myanmar
စစ်မှုထမ်းနေပီဖြစ်သော Exo အဖွဲ့ဝင် သုံးဦး ( ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်တော့ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးလုံး စစ်မှုထမ်းတာ ပီးစီးနိုင်)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာကြံခိုင်သည့် အမျိုးသားမဆို စစ်ထဲကို ၂ နှစ်တာဝင်ရပါတယ်။ ထိုကိစ္စကိုလည်း နာမည်ကြီး မင်းသား၊အဆိုတော်များလည်း ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ Exo အဖွဲ့တွင် Suho, Xiumin, Lay, Baekhyun, Chen, Changyeol, D.O., Kai, နှင့် Sehun ဆိုသည့် ယောကျ်ားလေး ၉ဦး ဖြင့်ဖွဲ့ထားပါတယ်။ယခုအခါတွင် သူတို့ ၉ဦးဟာ စစ်တပ်ထဲဝင်ရန် အရွယ်ကို ရောက်ရှိလာပီဖြစ်သဖြင့် တစ်ယောက်ပီးတစ်ယောက် စစ်တပ်ထဲ သွားရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေလ ရရက်နေ့တွင် Xiumin ကတော့စစ်တပ်ထဲ ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ Xiumin ဟာ Exo အဖွဲ့ဝင်တွေထဲတွင် စစ်တပ်ထဲကို ပထမဆုံးဝင်သူ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင်တော့ D.O. ကဒုတိယတစ်ယောက်အနေနဲ့ စစ်ဆပ်ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၂၆နှစ်သာရှိသေးသော်လည်း Xiumin စစ်ထဲဝင်ပီးနောက်မှတော့ သူလည်းမြန်မြန် စစ်မှုထမ်းချင်သည်ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။ D.O. ဟာသူတာဝန်ကျတဲ့နေရာကို လျှိုဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ privacy ကိုထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်သောကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Suho ကလည်း ၂၀၂ဝခုနှစ်၊မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် စစ်မှုထမ်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။ သူဟာယခုနှစ်မှာ ၂၉နှစ်ပြည့်ပီဖြစ်သောကြောင့် စစ်ထဲကို ဝင်ရတော့မယ့်ဆဲဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Suho ကသူ့​၏ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်လည်း စာရေးထားပါတယ်။
“ Exo-L အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် ဒီစာကိုရေးရတာက အားလုံးကို ပြောစရာရှိလို့ပါ။ မေလ ၁၄ရက်နေ့တွင်တော့ ကျွန်တော် စစ်မှုထမ်းတဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျွန်တော် လွမ်းနေမှာပါ။ကျွန်တော်နှင့် Exo အဖွဲ့ကို ချစ်ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း အမြဲကျန်းမာပါစေ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးလည်းတင်သလို ချစ်လည်းချစ်ပါတယ်။”
အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားနှင့် ကြည့်ပီး နောက်ထပ်စစ်မှုထမ်းရမည့် သူများကတော့ Chanyeol, Chen နှင့် Baekhyun တို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထဲတွင် စစ်မှုထမ်းလောက်ပါတယ်။ Exo အဖွဲ့ဝင်အားလုံး စစ်မှုထမ်းပီးစီးမည့် အချိန်ကတော့ ၂၀၂၅တွင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Next Song Seung Heon နှင့် Liu Yifei တို့ပြန်တွဲနေတယ်လို့ သတင်းများထွက်လာပီးနောက် ဖြစ်လာသည့်နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာ »
Previous « ကိုရီးယားမင်းသားတစ်ဦးအနေနဲ့ Youtube မှတ်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ Park Seo Joon